Nhau - Nyanzvi 'Zano paMedical Aesthetics muCOVID-19 Era
Maitiro ekuvhurazve bhizinesi uye kugadzirira kudzoka kwemurwere? Iyo denda mamiriro angave ari ekudzosera-kumashure mukana
Munguva yedenda re COVID-19, makiriniki mazhinji ekurapa ekushongedza kana masalon ekuvhiya akavhara mashandiro nekuda kwemitemo yekukiya guta. Sezvo kuregererwa kwenzanga kuri kurerutswa zvishoma nezvishoma uye kukiyiwa kuri kurerukirwa, kuvhurazve bhizinesi kwadzokera patafura.
Nekudaro, kuvhurazve bhizinesi harisi rekungodzokera pane zvakajairwa, zvakakosha kuti ushandise mamwe maitirwo kuitira varwere uye hutano hwako hwemabasa uye kuchengetedzeka.
Kunyangwe hosha ye COVID-19 yaisa bhizinesi rakawanda mumamiriro akaoma, unogona kunge uri mukana wekuwongorora zvekare zvidziviriro zvekiriniki zvechirwere chinotapukira uchipa kurapwa kuvarwere.
Nyanzvi's Zano kune Kurapa Aesthetic Zvikamu
Sekureva kweAustralasian Society yeCosmetic Dermatologists, ivo vakapa gwara rakazara muna Kubvumbi gore rino. Yakaratidza kuti kune laser nemwenje-yakavakirwa zvishandiso, mazhinji marapirwo anoitwa akatenderedza kumeso ayo anosanganisira mhino, muromo, uye mucosal huso dzinowanikwa munzvimbo dzine njodzi huru; Naizvozvo, makiriniki anofanirwa kutora matanho ekudzivirira.
Iyo COVID-19 denda inotipa mukana wakanaka wekutarisa makiriniki edu 'zvirwere zvinotapukira zvinodzivirira kusanganisira yedu Laser & magetsi-based zvishandiso uye mabatiro atinoita chero anofambidzana mapurumu / utsi.
Sezvo iyo coronavirus yemunhu-ku-hutachiona hwevanhu iri kuburikidza nemadonhwe uye kufema kwavo kana kuisa pa mucosa pamwe nemaoko akasvibiswa, zvakakosha kugadzirisa nzira yekudzivirira zvakare kumushandi wako uye kunyangwe kuvarwere. Heano mamwe mazano kubva kuAustralasian Society yeCosmetic Dermatologists:
Iyo Basic Sterilization
Usati uye mushure mekusangana nemurwere, kana mushure mekubvisa chako chekushandisa chekudzivirira, kugeza mawoko nguva dzose (> masekondi makumi maviri) nesipo nemvura ndiyo nzira yakakosha yekuderedza hutachiona. Uye chengeta mundangariro kuti usabata unobata kumeso, kunyanya maziso, mhino, uye muromo.
Zvekuchengetedzwa kwekiriniki uye kwevarwere, kuchenesa uye kuisa utachiona kwenzvimbo nemidziyo yekurapa zvinodikanwawo zvakanyanya. Doro rakatenderedza 70-80% kana sodium hypochlorite 0.05-0.1% inoratidza kuti inoshanda.
Ndokumbirawo kuti urambe uchifunga kuti sodium hypochlorite kana bleach inogona kukuvadza zvekurapa. Zvirinani kushandisa doro pachinzvimbo.
Inogona Aerosol Kugadzira Dermatology Maitiro
Kumakiriniki eesthetics ekurapa, neimwe nzira hazvidziviriki kuva nemishonga inosanganisira kugadzira eerosol inogadzira
● Yese laser plume uye magetsi ekurapa
● Mhepo / Cryo & humidified kutonhodza masisitimu anosanganisira akasimba mune akavakirwa kana emahara masisitimu ekumira ari mune edu mazhinji michina senge bvudzi kubvisa lasers, Nd: Yag laser, uye CO2 laser.
Kune isiri-aerosol uye laser plume inogadzira marapirwo, yakajairika masiki ekuvhiya anokwanisa kupa hutachiona kudzivirira. Asi yeablative laser yakadai se CO2 laser inosanganisira zvinyama zvinopisa, zvinoda kutariswa zvakanyanya kuchengetedza varapi uye varwere kubva ku biomicro tunyowani uye kugona kwavo kutapurira hutachiona hunoshanda.
Kuti kuderedze njodzi, zvinokurudzirwa kushandisa laser yakatemwa maski kana N95 / P2 mask. Uyezve funga kushandisa plume yekutsvaira system (suction nozzle <5cm kubva kune yekurapa saiti) uye isa HEPA firita mune AC system kana yako laser lab mhepo yekuchenesa.
Misoro-Kumusoro kune Varwere
Kurudzira varwere kuti vachenese nzvimbo yavo yekurapwa vasati varapwa uye vadzivise kubata kumeso kwavo kana nzvimbo yekurapa kusvikira kurapwa.
Kwekiriniki, tinofanirwa kuve nechokwadi chekuti chengetedzo yemunhu inoraswa senge inodzivirira maziso kana kuuraya utachiona pakati pevarwere.
Paunenge Uchiita Kugadzwa
● Funga nezve kudzikira, semurwere mumwe panguva
● Funga nezvenguva dzakasiyana dzevarwere vanogona kunge vane njodzi huru
● Ganhurira vashanyi vese vasina kukosha
● Nyatsotarisa telehealth pazvinogoneka
● Funga sevashoma huwandu hwevashandi sezvinobvira
(Sekureva kwenharaunda yekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva COVID-19 Coalition-Nongedzo dzeKutangazve Kuvhiya Kwesarudzo Post-COVID-19)
Zvese mune zvese, inguva yekuzvipira zvimwe nekusave neakatenderera varwere. Kunyorera mamwe maitiro kungave kunetsa asi kuri madikanwa kuvimbisa kuchengetedzeka kwevose vari vaviri vashandi nevarwere. Iyo inguva yakaoma nguva yedu tese, asi inogona zvakare kuve nguva yekuwongorora zvekare matanho ekudzivirira ekupa kurapa kuri nani uye kwakachengeteka kuvarwere vedu mune ramangwana.
Nharaunda yekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva COVID-19 Mubatanidzwa — Nongedzo Yekutangazve Kuvhiya Kwesarudzo Post-COVID-19
Australasia Society yeCosmetic Dermatologists (ASCD) -Gwara rekushandisa kwakachengeteka kana Laser & Energy Yakavakirwa Midziyo inofunga nezveCovid-19 / SARS-CoV-2
Accenture-COVID-19: 5 zvinokosheswa kubatsira kuvhurazve uye kudzoreredza bhizinesi rako